🥇 ▷ Waa maxay shards qadiimiga ah ee Monster Hunter World? ✅
Waa maxay shards qadiimiga ah ee Monster Hunter World?
Ma haysaa gabal gaboobay oo aan fikrad ka haysan waxa lagu qabanayo? Waxaan sharaxaynaa sida aad ku heshay iyo dhammaan xulashooyinka loo adeegsado.
Haddii aad u isticmaasho Tailraider Safari gudaha Monster Hunter World, gaar ahaan Hoarfrost Reach, waxaa laga yaabaa inaad qaadatay shisheeye hore oo qalaad. Kuwa idinka mid ah oo la yaaban waxa ay alaabadani tahay, waxaan baaray liiska ciyaarta iyo qadka tooska ah si aan u ogaado si aysan u baahnayn. Hoos waxaad ka heli doontaa waxkasta oo aad ku sameyn karto Qeybaha Hore.
Shards-kii hore – World Monster Hunter World
Shard-qadiimiga ah waa maaddo Safari Tailraider uu ka heli karo markii ay wareegayaan Frost Range inta ay safrayaan. Tani waa walxaha Rarity 9 waxayna leedahay sumad u eg Sinister Cloth ciyaarta salka. Waxaa keliya oo laga heli karaa ‘Master Rank’ sidaas darteedna waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo qalab lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay adiga iyo Palico Hoos waxaa ku yaal liiska waxyaabaha aad ka sameyn karto kuwa qadiimiga ah ee loo yaqaan ‘Old Shards’ sida uu qabo Monster Hunter World wiki:
Felyne Artian Disc Alpha + (Hubka Palico)
Farshaxanka Helmets Alpha + (Madaxa hubka)
Koofiyadaha Artian Helmets Beta + (Madaxa hubka)
Farshaxanka Artifanka Alfa + (Chest Armor)
Qeybta Artian Mail Beta + (Chest Armor)
Artam Vambraces Alpha + (hubka hubka)
Artin Vambraces Beta + (hubka hubka)
Farshaxanka farshaxanimada Artian Coil Alpha + (Xarkaha Xarka)
Artian Coil Beta + (Xadhiga Xarkaha)
Alfa Art Greaves + (lugta lugta)
Beta + Artian Greaves (lugta lugta)
Felyne Artian Core Alpha + (Palico Madaxa Gear)
Flyne Artian Gear Alpha + (Palico Chest Armor)
Xilligan, waxay umuuqataa sidii kuwii hore ee Shards aysan ka soo bixin raadinta, in kastoo aanan hubin taas. Hadday sidaas tahay, waa dhif iyo xulashadaada ugu fiican inaad u dirto Safari Tailraideraga Hoarfrost Reach si aad wax ugu hesho. Haddii aad xasuusato inaad isticmaasho Tailraider Safari isla marka ay soo noqdaan, waa inaad awood u yeeshaa inaad wax badan soo aruuriso muddo gaaban gudaheeda. Ma hubo inaad jeceshahay hubka aad ka samaysan karto, laakiin waad ku sahamin kartaa Smithy hoosta ihamọka darajada Master ‘set oo go’aan ka gaadho naftaada
Hadda oo aad ogtahay waxa aad ku samaynayso Qadiimigaas Shard, iyo sida aad wax dheeraad ah uga heli karto, nala soo xiriir oo jooji tusaha istiraatiijiyadda Monster Hunter World. Waxaan si aad ah ugu dadaalnaa sidii aan u ogaan lahayn qaybaha ciyaarta ee khiyaanada badan si aad wakhti badan uga heshid ugaarsigaaga isla markaana waqti aad u yar ku xoqdo madaxaaga.